Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : nytenymalagasy
Teny iditra Ny Teny Malagasy
Sokajin-teny anarana (lohatenin' boky na seho an-tsehatra)
Zana-dohateny Fizarana II: fomba Malagasy (kilasy faha-4 sy faha-3)
Fanonta printy Ambainy: 27cm. Haavony: 18cm. Takila: 79.
Voambolana Haisoratra: boky
Tsanganana sy sary iray takila Ny lohateny rehetra
Sokajin-teny anarana (lohatenin-tantara fohy na kabary)
Mpanoratra Andriamanantena Georges, 1994
Fanonta printy 1994.
Fanoritsoritana Lahateny nataon’i Rado tetsy amin’ny Akademia Malagasy tetsy Tsimbazaza, ny 25 Jona 1994
Lahatsoratra Tompokolahy sy Tompokovavy,
Tantara kely iray no entinay ho fampidirana izao famelabelarana izao. Hoy ity tovolahy iray avara-pianarana sady tia tanindrazana, raha namory ireo tanora tantsaha sakaizany izy, teny ambanivohitra :
« Ni-inviter anareo Tantsaha iray génération amiko aho, mba hiara mi-étudier ity projet de développement nanaovako étude plus ou moins approfondie ity. Mi-concerner ny région-tsika mantsy izy io, ka tokony hi-sensibiliser-na antsika masse paysanne amin’izao période de décollage économique izao. Ny cohésion sy ny participation de tout un chacun anefa no tena primordiale amin’izany, ka tsy ny élites sy ny intellects ihany no ho décideurs sy piliers amin’ny réalisation sy ny exécution-ny, fa ny population active sy isika izay avenir-n’ity tany ity. Raha tsy izany, tsy avotra izao situation déplorable sy catastrophique izao. Mila stratégie sy plan triennal bien au point anefa izany fa tsy azo atao au pif fotsiny.
Izany no ni-convoquer-na antsika exprès amin’ity réunion de sensibilisation ity. Isika rehetra sans exception izany no samy hilaza izay point de vue-ny avy, vis-à-vis de ce projet. Tout au moins, izay mba suggestion na solution intermédiaire sy adéquate any an-tsainareo any. Misokatra àry izao ny débat sy ny discussion ka tout le monde peut prendre la parole. Merci ! »
Nangina eran’ny trano. Azontsika an-tsaina avy hatrany fa tsy naharay afa-tsy teny vitsy tamin’ny kabarin’Andriamatoa ireto Tantsaha sakaizany. Ary tsy nahagaga koa raha tsy nanan-kolazaina fa nifampijerijery sy nifampiandriandry fotsiny. Nisafoaka ilay tovolahy mpandahateny, ka niriatra nanao hoe : « izao ihany ilay mampi-décevoir ny technicien aminareo, fa tsy capable hi-saisir ny occasion profitable sy favorable tahaka itony, » sady lasa izy nandeha.
Miomehy isika mandre ny tenin’Andriamatoa, anefa, moa tsy ny sarintsika ihany koa ve no nasehony tamin’io fotoana io ? Mety tsy hihomehy koa anefa isika, satria efa zatra fiteny vandambadana toy izany ny sofintsika. Ny fihomehezantsika na tsy fihomehezantsika azy dia zavatra iray, fa ny mampalahelo dia ireto fatiantoka roa nitranga tamin’io fotoana io.
Fatiantoka voalohany : tsy tafita ilay hevitra sy fikasana tsara natolotr’Andriamatoa, satria tsy nisy azon’ny tantsaha sakaizany izay tiany holazaina. Fatiantoka faharoa : kivy ilay manampahaizana satria noraisiny ho fahalainan-kandroso ny fanginan’ireto tanora, tsy nanan-kolazaina tamin’izay hevitra narosony.
Fa ho hafa noho izany (Jereo ny tapany I) kosa ny zava-niseho raha tahaka izao no nitondrany ny teniny.
« Misaotra anareo, lehiretsy, namaly ny antso nataonay. Isika izao mantsy no fody niara-nitsindroka sy akanga niara-nanjohy, ka tonga amin’ilay hoe : tsindranolahy an-keniheny, ka ny tama-miray ihany no miaraka. » Manana tsirin-kevitra sy vinavina ho enti-mampandroso ity faritra misy antsika ity izahay, satria tsy azo jerem-potsiny ny tany nahabe ary tsy azo atao tazan-davitra ny fanasoavan-tanindrazana. Izao izy izao no fahavoazany, izao izy izao no fahantrany , ka dia hanao tahaka an’Ikaladala eo ambody tenona ve isika, ka sady tsy hanohy ny tapaka no tsy hanentina ny madilana ? Ny adidy koa tsy an’olon-dratsy, ka dia nentinay eto izany hatao loa-bary an-dasy, satria ny hevitry ny maro no mahataka-davitra. Ilàna firaisan-kina izy io ka iantsoana antsika rehetra, satria izay tsy mahay sobika, mahay fatam-bary. Ireny nozaraina tamintsika ireny ny drafitra sy vinavina hotanterahina, ka aoka tsy hifampisorona na hijery arina an-tava. Tsy hoe « tian-kano, tsy tian-kano » koa izy io, fa mahazo milaza ny heviny avy izay manan-kolazaina, fa tsy tongobolo tsy akory isika ka hotampenam-bava. Tsy mety koa, anefa, ny manilika ny adidy amin’olom-bitsy, nefa samy hioty ny vokatra ihany avy eo. Ireny ilay antsoin’ny razana hoe : « sady tsy hitery omby no tsy hihazon-janakomby fa mitady hisodika ny herotra fotsiny », na hanao tahaka ny « angady ka ny zarany mihoso-menaka sady mijoro, nefa ny lelany mihoso-potaka miady amin-tany. » Manana antsika rehetra izao ho reharehany ity tany nahalatsahan’ny tavonintsika ity, ka dia hangetaheta ambony lakana ve, sa ho noana eo am-pototry ny sompitra ? Koa saino lalina, saino marivo, fa isika izao no velona fanovan’ny maty, ary zanaka mpandova ny anaran-dray, ka tsy avelantsika ity tany ity raha tsy manana izay voninahiny, ary asandratra koa ny vahoakany hahita ny anjara-masoandrony. Sa tsy izay no izy, leiretsy ?
« Izay », hoy ny firedon’ireto sakaizany.
Raha tahaka an’iny, hoy izahay teo, no nitondran’ilay zatovo ny teniny, dia azo inoana fa voaentana tokoa ny mpihaino, satria Teny Malagasy midona any am-pon’ny mpihaino no nenti-nanambara azy. Ny fo mantsy no mahery tosika noho ny saina amintsika malagasy ka manome toetra ilay olona taorin’izay teny nolazaina taminy. Itompoanay teny fantatra izany. Fa ataovy amin’ny teny vahiny ange ny fampiononana mana-manjo, nefa samy malagasy no mifanatrika eo ! Hahita fiononana ve ireo tra-pahoriana ? Atao vy amin’ny teny vahiny hoe ny kabarim-pifidianana, dia mba saino kely izay isam-bato mety ho azonao amin’izany. Fa tsy maintsy ny Teny Malagasy ihany no afaka manentana ny fon’ny vahoaka raha hitory fampandrosoana marina ianao. Midona sy manentana ny fo avy hatrany mantsy ny Teny Malagasy, ka manamboatra ny toe-po.
Diniho kely ireto, azafady, dia hazava aminao ny fahamarinan’izany : « Nafana fo ny fokonolona, ka tafatsangana haingana ny sekoly. » Izany no fiteny, fa tsy hoe : « nafana saina » ny fokonolona… » « Niteraka risipo tao amin’ny vahoaka ny kabarin’ilay olomboafidy », fa tsy hoe : « niteraka risitsaina. » « Namoifo ny vahoaka fa fitaka avokoa ny toky nomena … », fa tsy misy amintsika malagasy izany hoe « namoisaina ny vahoaka. » « Nahafapo azy ny zavatra reny tany am-pivoriana… » fa tsy hoe « nahafa-tsaina azy ny zavatra reny. » « Vao reny ilay vaovao dia nentim-po izy ka lasa … » fa tsy misy amintsika izany hoe « nentin-tsaina. » « Dia mba samy nahazo fahafahampo ny mpihaino rehetra, » fa tsy misy ny hoe « nahazo fahafahan-tsaina ny mpihaino. » « Nanala ny fony izy raha vao nandre ilay hafatra nalefa taminy. Fa tsy fiteny ny hoe « nanala ny sainy » izy.
Mbola azontsika tohizana ireny sy ny tahaka ireny, fa be dia be. Mazava amintsika àry izao fa ny fo no tanamilina ao anatin’ny olona, ka manentana ary manome azy toetra entiny miatrika toe-javatra iray. Ny enti-manentana ny fo kosa anefa, dia ny Teny ihany.
Koa raha te hanentana ny fon’ny vahoaka amin’ny Fampandrosoana isika dia ny Teny Malagasy ihany no afaka manao izany. Dia teny malagasy madio, tsy safiotra na vandambadana. Teny malagasy feno OHATROHATRA amana OHABOLANA sy HAINTENY, fa ireny no mamoha varavarana ny fo.
Nohavaozina tamin' ny 2020/11/30